निकै भाग्यशाली हुन्छन् यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति - samayapost.com
निकै भाग्यशाली हुन्छन् यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति
समयपोष्ट २०७७ चैत ३ गते ११:४८
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन भन्ने विषयमा जानकारी गराउदैछौ ।
बिहीबार: बिहिबार जन्म भएका व्यक्तिहरु निकै मेधावी, शान्त र समझदार हुने गर्दछन् । उनीहरु निकै विध्वान र पराक्रमी पनि हुने गर्छन। यिनीहरुको ३० वर्ष उमेर नाघे पछि भाग्य खुल्ने र सोचेभन्दा बढी धन सम्पति कमाउने अवसर मिल्नेछ। बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै पैसा कमाउने गर्दछन् र मन खोलेर खर्च पनि गर्छन् । यी व्यक्तिहरुमा नेतृत्व गर्ने गुण हुने भएकाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेपनि उच्च पद हाँसिल गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
बिहानै उठेर यस्ता कार्य गर्नुहोस्, चम्किन्छ भाग्य
गृह सजावट गर्दा यस्ता सामाग्री राख्न नछुटाउँनुहोस्,कहिले हुँने छैन धनको कमी
यौन सम्पर्क गरेपछि प्रेमिकाले अचम्मको माग राखेपछि….
जहाँ अर्काकी श्रीमती फकाएर खोस्न पाइन्छ
धनी बन्न चाहनुहुन्छ ? यी दश गल्ती गर्नबाट जोगिनुहोस्
यस्ता स्वभाव भएका ब्यक्तिमा कहिले पर्दैन लक्ष्मीको कृपा